भिम बरही मगर, ३१ जनवरी, हंगकंग, नेपालीहरूको छाता संगठनको रूपमा चिनिने हंगकंग नेपाली महासंघले मदनकृष्ण र हरिवंश (मह) को प्रमुख अतिथ्यमा १७ औ बार्षिक उत्सब कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । महले सभालार्इ सम्बोधन गर्नुका साथै कला पनि प्रस्तुत गरेका थिए । हामीहरू सवैको आफ्नै पहिचान छ । हामी भिन्न भिन्न आमाले जन्माएका सन्तान हौ तर पनि हामी सवैको अर्की आमा छिन ति हुन नेपाल आमा सम्बोधनको क्रममा भनेका थिए । महासंघले बार्षिक रूपमा नेपालका विशेष ब्यक्तिहरूलार्इ सम्मान गर्ने योजना बनाए अनुसार महलार्इ सम्मान गरीएको संघकी अध्यक्ष रीता गुरूले बताइन । विपिको योजना अनुरूप सैनिक दस्ता बनाएर नेतृत्व गरेका तथा टीम्बुरबोटे काण्डमा बच्न सफल जिउँदा शहिद भनेर काग्रेसले भन्दै आएको तर काग्रेसले देशको जिउदो शहिद बनाउन नसकेका एल पि गुरूङलार्इ पनि महासंघले सम्मान गरेको थियो । हंगकंगमा बसेर बिभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने र प्रगती गर्ने संस्था तथा ब्यक्तिहरूलार्इ पनि सम्मान गरीएको थियो । हंगकंगमा च्याउ सरी उम्रीएका लगभग दुर्इ सय जति संस्था छन तर महासंघमा भने हालसम्म बत्तिस वटा अवद्ध भएका छन । संघकी अध्यक्ष रीता गुरूङको अध्यक्षातामा सम्पन्न कार्यक्रमलार्इ महासचिब मोति चाम्लिङको सञ्चालनमा उपाध्यक्ष टंक राना मगरले स्वागत मन्तब्य दिएका थिए ।
महासंघको सर्न्दभ र आगमन भिजा
जब हंगकंग सरकारले १९९९ मा आगमन भिजा बन्द गरी दियो त्यसपछि नेपाली समाजमा खैला बैला मच्चियो । संयोगबस त्यस समयमा तत्कलिन प्रधानमन्त्री स्वा. गिरीजा प्रसाद कोइराला हंगकंग ट्रान्जिट भएर जापान जाने योजना रहेछ । हंगकंगका नेपालीहरूको तर्फबाट एकताबद्ध भर्इ भिजा खोल्नको लागि अनुरोध गर्दै ज्ञापन बुझाउने योजना बन्यो । त्यस समयमा हंगकंगमा त्यति धेरै संस्थाहरू थिएनन । तर पनि कसको नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र बुझाउने भन्ने अन्योलता चिरी एकताबद्ध हुनको लागि महासंघ बनाउने सल्लाह भयो । मणि किरात बान्तवाको नेतृत्वमा गोर्खाज फेडेरेशनको जन्म भयो । अहिले नेपाली महासंघ हंगकंगले चिनिन्छ । उपाध्यक्षमा तत्कालिन मगर संघका अध्यक्ष भोलानाथ थापा मगर र महासचिबमा अहिले हंगकंग विश्वविद्यालयका पि एच डि स्कोलर चुरा थापा थिए । चिम सा चुर्इको हलिडे इन होटलमा ज्ञापन पत्र बुझाउन महाबाणिज्यदुताबासले समय मिलार्इ दियो र यो पङ्तिकारलार्इ पनि मगर संघ हंगकंगको तर्फबाट सदस्यको रूपमा सहभागी हुने अवसर मिलेको थियो । अध्यक्ष बान्तवा काम विशेषले नभ्याउने भएपछि उपाध्यक्ष भोलानाथ थापा मगरको नेतृत्वमा एउटा मात्रै ज्ञापन पत्र बुझाउने भनियो । वेल रूममा कार्यक्रम शुरू भयो र भोलानाथ थापा मगरले हंगकंगको नेपालीको तर्फबाट भिजाको समस्या देखाउदै ज्ञापन पत्र बुझाए । लगत्तै हाम्रो पनि ज्ञापन पत्र छ भनी गोर्खाज फोरमले पनि ज्ञापन पत्र बुझायो । जसको नेतृत्व एकराज रार्इ र गणेश इजमले गरेका थिए । एक छिन त हलमा खैला बैला नै भयो र प्रधानमन्त्री कोइराला पनि आश्चर्यमा परे र सम्बोधन गर्ने क्रममा तपार्इहरू हंगकंगमा एक भएर बस्नुस नत्र समस्याको समाधान हुन गार्रहो हुन्छ र राजनिति गर्ने भए नेपाल आउनुस भनेका थिए । आज महासंघ जन्मिएको पनि १७ बर्ष भैसकेछ । महासंघ त जवानी भयो तर उक्त रोक्का भएको भिजा फुकुवा हुन सकेको छैन । भिजा फुकुवा हुनुको सट्टा घरेलु कामदार भिजा लगायत अन्य भिजा पनि हंगकंगमा बन्द भएका छन । अहिलेको अवस्था पहिलेको भन्दा भिन्न छ । राजनैतिक रूपमा पनि नेपालीहरू माथिसम्म पहुच पुग्ने भैसकेका छन । यो महासंघले उठाएको मुद्दा हो तर समाधान गर्न सकेको छैन । महासंघमा धेरै नेतृत्व आए गए महासंघ कता रूमलिएर कता गैरहेछ । आफुले उठाएको मुद्दा किन सफल हुन सकेन । फेरी एकचोटी पुर्नर बिचार गरी पहल गरे सम्भब हुन सक्छ । फियोना हंगकंगले धेरै कार्यक्रम गरेर पहल गर्रयो तर सकेन र छोड्यो ।
नेपाली क्लब हाउस
नेपालीहरूले भारतीय र फिलिपिनोहरूले जस्तै क्लब हाउस पाउने अवसर हुदाँ हुदै पनि पाउन नसक्नुको तितो यथार्थ कुनै दिन अवगत गराउने छु । किनकि भोलानाथ थापा मगर अध्यक्ष हुदा नेपाली क्लब हाउसको कुरा धेरै अगाडि बढेको थियो । थापा चुनाबमा हारे पछि क्लब हाउस पनि नेपालीले पाउन सकेन ।
Last Updated on Sunday, 14 February 2016 11:25
गणेश जंग राना
पाल्पा श्रीनगर समाज हङकङको ६ औ अधिबेशन कालिका रेस्टुरेन्ट युनलोङमा जनवरी २४ अाइतवारका दिन सम्पन्न भएको छ । अधिबेशनमा पाल्पालीहरूले उल्लेख्य सहभागिता जनाएका थिए । महिला दिदी बहिनीहरूको उपस्थिति संख्या पनि निकै बाकलो थियो । कार्यसमितिको पदाधिकारी चयनमा धेरैजसो नया अनुहारहरू देखा परेका छन । सन २००४मा स्थापना भएको समाज अाज छैठोै अधिबेशन सम्म अाइपुग्दा खासै उधाहरणीय कामहरू गर्न नसके पनि समाजले पाल्पालीहरूलाइ एउटै गोलबन्द बनाइ राख्न भने सफल भएको देखिन्छ । कार्यसमिति भित्र महिलाहरूको संख्या हेर्दा महिलाहरूमा पनि राम्रो सामाजिक कार्यमा अग्रसर भएको पाइन्छ । हुनत प्रत्येक कार्यक्रममा महिलाहरूकै प्रमुख भुमिका रहेकाछन । अाजको अधिबेशनले १७ सदस्यिय कार्यसमितिको चयन गरेको छ। नव निर्वाचित पदाधिकारीहरूको नामावली निम्नानुसार रहेका छन ।
(१) अध्यक्ष- पुर्ण दर्लामी
(२) उपाध्यक्ष- मन्जु थापा
(३) सचिब- झलक पल्ली
(४) सह सचिब- प्रमिला थापा
(५) कोषाध्यक्ष- लेख बहादुर थापा
(६) सहकोषाध्यक्ष- भोज थापा
(७) सदस्य- टीका थापा
(८) सदस्य- युग माया राना
(९) सदस्य- टेक थापा
(१०) सदस्य- रबिन थापा
(११) सदस्य- रिखिराम पल्ली
(१२) सदस्य- नारायण राना
(१३) सदस्य- दिपक राना
(१४) सदस्य- कुल थापा
(१५) सदस्य- मिना थापा
(१६) सदस्य- नगेन्द्र राज थापा
(१७) सदस्य- शिला राना गरी जम्मा १७ सदस्यिय कार्यसमितिको निर्बिरोध चयन भएको छन ।
Last Updated on Monday, 25 January 2016 15:07
भिम बरही मगर, १७ जनवरी, हंगकंग, मगर संघ हङकङ, मगर रोष गुमष्ठाको आयोजनामा युनलुङ थेटर हलमा मगर चलचित्र रैंयाँको सफल प्रदर्शन भएको छ ।
नेपालको ८ वटा जिल्लामा ५१ औं पटक र विदेशमा अमेरिकामा सफल प्रदर्शन भैसकेको लेखन र निर्देशक समेत रहेका मेकबहादुर पुन मगर (मेजन) ले बताए । यसको निर्माता हर्क आले मगर, तारामाया थापा मगर र अंकित पुन मगर हुन । चलचित्र प्रदर्शनको लागि निर्माता तारा थापा मगर, नायक अशोक आले मगर, निर्देशक मेक बहादुर पुन मगर, यवराज मास्की मगर गरी पाँच जना हंगकंग आएका छन । नेपालबाट आएका रैयाका अतिथिहरूलार्इ प्रशंसा पत्रले सम्मान गरीएको थियो । प्रमुख पात्रमा अशोक आले, प्रिया थापा मगर, दुर्गा ठाडा मगर, पुर्ण थापा मगर, राज थापा मगर, मिन पुन मगर, अनिता पुन मगर रहेका छन् भने यो तनहुँ र कास्कीको रमणीय स्थलहरुमा सुटिङ भएको हो । रैंयाँ भनेको मगर महिलाको पहिचान हो, यो मगर महिला संघको लोगोको रुपमा पनि रहेको छ । यसर्थ यसको प्रदर्शनमा मगर संघ, मगर महिला र मगर विद्यार्थीहरुले बिशेष चासो राखेर सहयोग गरिरहेको कुरा निर्देशक मेकबहादुर पुन मगरले बताए ।
यो चलचित्र जहाँ प्रदर्शन गरिरहेका छौं— त्यहाँ हाम्रो दायित्व भनेको यो हाम्रो पहिचान हो, यो मगर महिलाको लोगोको रुपमा प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा बुझाइरहेका छौं निर्माता समेत रहेकी तारा माया थापा मगरले प्रस्ट्याइन । यो मगर चलचित्रलाई चलचित्र विकास बोर्डले मगर भाषा र मगर समाजको हितको लागि योगदान दिए वापत भनेर सम्मान पनि गरेको छ ।
मगर संघ हंगकगकी अध्यक्ष चन्द्र ज्योति आले मगरलार्इ निमात्री तारा माया थापा मगरले उपहार स्वरूप चिनो भन्दै रैया दिएकी थिइन । मगर रोष गुमष्ठा हंगकंगका अध्यक्ष रविन्द्र थापा मगरको अध्यक्षतामा, सचिब सन्जु थापा मगरले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
Last Updated on Monday, 18 January 2016 15:51
भिम बरही मगर, २४ जनवरी, हंगकंग, सुजना गोले बचाऊ अभियान4जनवरी 2016 बाट हंगकंगमा सुरु गरेका समाजसेवी नरेन्द्र गुरूङले नसोचेको सहयोग रकम संकल भएको जानकारी गराए । मगर संघ हंगकंगको कार्यालय हल जोर्डनमा पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त जानकारी दिइएको थियो । जनसर्म्पक समिति हंगकंग र तमु समाज हंगकंगका समेत सल्लाहकार रहेका उनी साम्बो कोरीयन कम्पनीका सिनियर फोरमेन समेन हुन ।
सुनकोसी बाढी पिडित , जिब्रोको घाउ भएको बालक , भुकम्प पिडित र उमेश जंग रायमाझीको लागि पनि यस्तो अभियान चलाएर उनले सहयोग गरी सकेका छन । काम गर्ने सहकर्मीहरूबाटै सहयोग संकलन गर्न शुरू गरेका उनले रू. २१५०००। दुर्इ लाख पन्द्र हजार रूपैया संकलन भएको जानकारी गराए । यो रकम मेरो सक्रियतामा संकलन भएको हुनाले पारदर्शिताको लागि र सहयोगदाताहरूलार्इ पनि रकम सही ठाउँमा पुग्ने र उपचारमा सहयोग पुगेको कुरा जानकारी दिने उदेश्यले पत्रकार सम्मेलन गरेको बताए । धेरै साथीहरुबाट सहयोग प्राप्त भयो । सहयोगी ति हातहरु र ति साथीहरुलाइ मेरो लाखौ लाख सलाम आफ्नो लागि त सबै बाच्न सक्छ अरुलार्इ पनि बचाउन सक्ने पो सच्चा मानिस हुन् ।
यस संसार मानवता बिहिन हुंदै गइरहेको यो अवस्थामा पनि मानवताको नाता गास्ने मानिसहरु अझै छन भन्ने सन्देस हामीले दिनुछ । यसर्थ एउटा नेपाली चेली पैसाको कारणले उपचार गर्न नसकेर मर्न लागेको अवस्थामा हाम्रो सानो सहयोगले उनलाई बचाउन सकिन्छकी भनेर यो अभियान सुरु गरेका हौ । साथीहरु सबैलाई धन्यबाद । हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौ यतिका साथीहरुले सहयोग गर्नु हुन्छ भनेर , हामीलार्इ अझ हौसला बढेको छ । यस कार्यमा साथीहरुले सेयर गरि जुन सहयोग गरिदिनु भयो हामी कदापी भुल्ने छैनौ उनले थपे ।
Last Updated on Monday, 01 February 2016 16:12
मगर चलचित्र ‘रैंयाँ’ को यात्रा हङकङमा
हङकङ ,जनवरी १७ - मगर संघ हङकङको आयोजनामा यही जनवरी १७ गते मगर चलचित्र रैंयाँ शनिबार युनलुङ थेटरमा प्रदर्शन हुने भएको समाचार प्राप्त भएको छ ।
यसको व्यवस्थापन मगर साँस्कृतिक समुह हङककङ रहेको छ । यसको सबै तयारी पुरा भएको समाचार मगर साँस्कृतिक समुहका अध्यक्ष रविन्द्र थापा मगरले बताएका छन् ।
नेपालको ८ वटा जिल्लामा ५१ औं पटक र विदेशमा अमेरिकामा प्रदर्शन हुन सफल यो मगर भाषा र नेपाली खस भाषामा संयुक्त रुपमा निर्माण भएको चलचित्रको लेखन र निर्देशन मेकबहादुर पु (मेजन) ले गरेका हुन् भने यसको निर्माण हर्क आले मगर, तारामाया थापा मगर र अंकित पुन मगरले गरेका हुन् । यसको प्रमुख पात्रमा अशोक आले, प्रिया थापा मगर, दुर्गा ठाडा मगर, पुर्ण थापा मगर, राज थापा मगर, मिन पुन मगर, अनिता पुन मगर रहेका छन् भने यो तनहुँ र कास्कीको रमणीय स्थलहरुमा सुटिङ भएको हो । यसको लागत १८ लाख लागेको कुरा हर्क आले मगरको छ भने रैंयाँ भनेको मगर महिलाको पहिचान हो, यो मगर महिला संघको लोगोको रुपमा पनि रहेको छ । यसर्थ यसको प्रदर्शनमा मगर संघ, मगर महिला र मगर विद्यार्थीहरुले बिशेष चासो राखेर सहयोग गरिरहेको कुरा निर्देशक मेकबहादुर पुन बताउनु हुन्छ ।
यो चलचित्र जहाँ प्रदर्शन गरिरहेका छौं— त्यहाँ हाम्रो दायित्व भनेको यो हाम्रो पहिचान हो, यो मगर महिलाको लोगोको रुपमा प्रयोग भएको छ भन्ने बताईरहेको कुरा यसको निर्माता मध्येका एक तारामाया थापा मगरको छ । यो मगर चलचित्रलाई चलचित्र विकास बोर्डले मगर भाषा र मगर समाजको हितको लागि योगदान दिए वापत भनेर सम्मान पनि गरेको छ ।
Last Updated on Monday, 18 January 2016 15:06